Ikhabhinethi yezendalo elunxwemeni. Boca del Cielo - I-Airbnb
Ikhabhinethi yezendalo elunxwemeni. Boca del Cielo
Igumbi lakho lokulala e ungquphantsi sinombuki zindwendwe onguEntremares
Siyayithanda indalo. Sibekwe kweyona ndawo iluhlaza nethuleyo yesi siqithi ecaleni kolwandle olukhulu olulodwa, phakathi kweemangrove, imithi yekhokhonathi eneminyaka eli-100 ubudala, imithi yeziqhamo, kunye nezilwanyana ezininzi. Yindawo esembindini wendalo, ejikelezwe ngamanzi. Apha akukho nqwelo-mafutha okanye ingxolo ngaphandle kwaleyo yeentaka nolwandle. Sisilayi sezulu. Yiyo loo nto sisebenzele ukwenza i-Entremares ibe yendalo ephilayo kangangoko; asisebenzisi ikhonkrithi kwaye siphatha amanzi amdaka ngeefilitha zendalo.
I-Entremares inokufikelela kunxweme kunye nechweba ukongeza kwindawo enkulu eluhlaza ezaliswe ngamasundu kunye nemithi yeziqhamo.
Sikwisiqithi, ngoko ke kufuneka sikuchole kwelinye icala lemithi yemangrove. Sazise ukuba uza kufika nini ukuze sikwazi ukucwangcisa uhambo lwakho e-El Paso, eColonia de Pueblo Nuevo.
Yindawo esembindini wendalo kwaye ijikelezwe ngamanzi. Apha akukho moto, akukho ngxolo ngaphandle kwaleyo yeentaka nolwandle. Sisiqwenga sezulu.
Sikwisiqithi, ngoko kufuneka siye kumkhangela kwelinye icala lomthi wemangrove. Sixelele ixesha oza kufika ngalo ukuze ucwangcise ukuthatha kwakho. Indawo yethu yokuqokelela i-El Paso, iColonia de Pueblo Nuevo.
Ngexesha lokuhlala kwakho kuya kuhlala kukho umntu onoxanduva lokuphendula nayiphi na imibuzo.
Qhagamshelana nathi nge-imeyile okanye ngefowuni ukudibana nawe, siya kuchaza indlela yokufika ngaphandle kokulahlekelwa kwaye siya kukuthabatha ngesikhephe sethu. Siyazi ukuba sikwindawo ekude, ngoko ungathembela kunye nathi ukukunceda ekufikeni kwakho. Ungaqhagamshelana nathi kuFacebook njengo-@entremaresmexico okanye kuWhatsApp.
Qhagamshelana nathi nge-imeyile okanye ngefowuni ukudibana nawe, siya kuch…